May 2018 | Language Century Language Century
4:35 AM C-Video , Chinese
တရုတ်ဘာသာ အရည်အချင်းစစ် စာမေးပွဲ HSK ဖြေဆိုမယ့်သူများအတွက် ဝေါဟာရတွေကို အလွယ်တကူ လေ့လာနိုင်စေဖို့ ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာလေးကို ပို့ချပေးလိုက်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ - HSK Level - 1 (Video Lesson)
အကြောင်းအရာ - ဝေါဟာရ အပိုင်း - ၄ ( 91 - 120 )
HSK Level 1 ဝေါဟာရမြား အပိုငျး - ၄ ။
တရုတျဘာသာ အရညျအခငျြးစဈ စာမေးပှဲ HSK ဖွဆေိုမယျ့သူမြားအတှကျ ဝေါဟာရတှကေို အလှယျတကူ လလေ့ာနိုငျစဖေို့ ဗီဒီယိုသငျခနျးစာလေးကို ပို့ခပြေးလိုကျပါတယျ။
သငျခနျးစာ - HSK Level - 1 (Video Lesson)
အကွောငျးအရာ - ဝေါဟာရ အပိုငျး - ၄ ( 91 - 120 )
ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဗီဒီယို သငျခနျးစာ ပို့ခခြကျြ - Video Lesson - HSK 1
1:44 AM C-Video , Chinese
အကြောင်းအရာ - ဝေါဟာရ အပိုင်း - ၃ ( 61 - 90 )
HSK Level 1 ဝေါဟာရမြား အပိုငျး - ၃ ။
အကွောငျးအရာ - ဝေါဟာရ အပိုငျး - ၃ ( 61 - 90 )
9:02 AM C-Video , Chinese
အကြောင်းအရာ - ဝေါဟာရ အပိုင်း - ၂ ( 31 - 60 )
HSK Level 1 ဝေါဟာရမြား အပိုငျး - ၂ ။
အကွောငျးအရာ - ဝေါဟာရ အပိုငျး - ၂ ( 31 - 60 )
7:59 AM C-Video , Chinese
အကြောင်းအရာ - ဝေါဟာရ အပိုင်း - ၁ ( 1 - 30 )
HSK Level 1 ဝေါဟာရမြား အပိုငျး - ၁ ။
အကွောငျးအရာ - ဝေါဟာရ အပိုငျး - ၁ ( 1 - 30 )
10:00 PM C-Video , Chinese
သင် သိချင်တာတွေ တယောက်ယောက်ကို မေးမြန်းချင်တဲ့အခါ ဘယ်လိုမေးရမလဲ၊ ဘယ်လိုမေးသင့်လဲ ဆိုတာကို ဒီသင်ခန်းစာလေးက သင့်ကို အထောက်အကူ ပြုပေးမှာပါ။
သင်ခန်းစာ - တစုံတရာ မေးမြန်းခြင်း (Video Lesson)
သငျ သိခငျြတာတှေ တယောကျယောကျကို မေးမွနျးခငျြတဲ့အခါ ဘယျလိုမေးရမလဲ၊ ဘယျလိုမေးသငျ့လဲ ဆိုတာကို ဒီသငျခနျးစာလေးက သငျ့ကို အထောကျအကူ ပွုပေးမှာပါ။
သငျခနျးစာ - တစုံတရာ မေးမွနျးခွငျး (Video Lesson)
ဗီဒီယို သင်ခန်းစာ ပို့ချချက် - ဗီဒီယို သငျခနျးစာ ပို့ခခြကျြ - Video Lesson
9:36 PM C-Video , Chinese
အချိန်နဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ စကားပြောပုံစံလေးတွေအတွက် အသုံးများတဲ့ ဝါကျတိုလေးတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
သင်ခန်းစာ - အချိန်အကြောင်း (Video Lesson)
အခြိနျနဲ့ ပါတျသကျတဲ့ စကားပွောပုံစံလေးတှအေတှကျ အသုံးမြားတဲ့ ဝါကတြိုလေးတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးထားပါတယျ။
သငျခနျးစာ - အခြိနျအကွောငျး (Video Lesson)
3:52 AM C-Word , Chinese
သင် ကြက်ကြော်စားရတာ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုရီးယားကြက်ကြော်ဆိုင် တစ်ဆိုင်ဖြစ်တဲ့ LOTTERIA ကိုတော့ သိပါလိမ့်မယ်။
乐天利 lè tiān lì
လဲာ့ထျန်းလိ - LOTTERIA
炸鸡 zhá jī
ကျာhကျီး - ကြက်ကြော်
炸鸡腿 zhá jī tuǐ
ကျာhကျီးထွေ - ကြက်ပေါင်ကြော်
肯德基 kěn dé jī
ခဲင်တဲယ်ကျီး - KFC
番茄酱 fān qié jiàng
ဖန်းfချယ်ကျန့်(င်) - ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် | ketchup
ခဲယ်းခိုခဲယ်လဲာ့ - ကိုကာကိုလာ | coke
橙汁 chéng zhī
ချဲင်h(င်)ကျီးh - orange juice
果汁 guǒ zhī
ကော်ကျီးh - အသီးဖျော်ရည်
Lètiānlì shì shǔyú Lètiān jítuán de liánsuǒ kuàicān qíyè.
လဲာ့ထျန်းလိ ရှစ်h ရှူhယွီ လဲာ့ထျန်းကျီးထွမ်တဲ့ လျန်းစော် ခွိုက်ဆန်းချီယဲ့
LOTTERIA ဟာ LOTTE Group ရဲ့ ဆက်စပ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ အရံသင့် အစားအသောက် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။
Lètiān jítuán shì Hánguó wǔ dà qíyè zhī yī,
လဲာ့ထျန်းကျီးထွမ် ရှစ်h ဟန်းကော် ဝူတာ့ချီယဲ့ ကျီးh ယီး
LOTTE Group ဟာ တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ အကြီးဆုံး စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ငါးခုထဲက တစ်ခုအပါအဝင် ဖြစ်ပြီး၊
LOTTERIA - Lètiānlì de míngzì yuányú tā de mǔ gōngsī LOTTE (Lètiān).
LOTTERIA - လဲာ့ထျန်းလိတဲ့ မျင်(င်)ဇစ်z ယွမ်းယွီ ထားတဲ့ မူကုံး(င်)စီး LOTTE ( လဲာ့ထျန်း )
LOTTERIA ဆိုတဲ့ နာမည်ဟာ မိခင်ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ LOTTE ကနေ ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။
LOTTERIA - တရုတျလို ဘယျလိုချေါသလဲ။
သငျ ကွကျကွျောစားရတာ ကွိုကျတယျဆိုရငျတော့ ကိုရီးယားကွကျကွျောဆိုငျ တဈဆိုငျဖွဈတဲ့ LOTTERIA ကိုတော့ သိပါလိမျ့မယျ။
လဲာ့ထနျြးလိ - LOTTERIA
ကြာhကြီး - ကွကျကွျော
ကြာhကြီးထှေ - ကွကျပေါငျကွျော
ခဲငျတဲယျကြီး - KFC
ဖနျးfခယျြကနျြ့(ငျ) - ခရမျးခဉျြသီးဆော့ဈ | ketchup
ခဲယျးခိုခဲယျလဲာ့ - ကိုကာကိုလာ | coke
ခြဲငျh(ငျ)ကြီးh - orange juice
ကျောကြီးh - အသီးဖြျောရညျ
လဲာ့ထနျြးလိ ရှဈh ရှူhယှီ လဲာ့ထနျြးကြီးထှမျတဲ့ လနျြးစျော ခှိုကျဆနျးခြီယဲ့
LOTTERIA ဟာ LOTTE Group ရဲ့ ဆကျစပျလုပျငနျးတှဖွေဈတဲ့ အရံသငျ့ အစားအသောကျ စီးပှားရေးလုပျငနျးတှထေဲမှာ ပါဝငျပါတယျ။
လဲာ့ထနျြးကြီးထှမျ ရှဈh ဟနျးကျော ဝူတာ့ခြီယဲ့ ကြီးh ယီး
LOTTE Group ဟာ တောငျကိုရီးယားနိုငျငံရဲ့ အကွီးဆုံး စီးပှားရေးလုပျငနျး ငါးခုထဲက တဈခုအပါအဝငျ ဖွဈပွီး၊
LOTTERIA - လဲာ့ထနျြးလိတဲ့ မငျြ(ငျ)ဇဈz ယှမျးယှီ ထားတဲ့ မူကုံး(ငျ)စီး LOTTE ( လဲာ့ထနျြး )
LOTTERIA ဆိုတဲ့ နာမညျဟာ မိခငျကုမ်ပဏီဖွဈတဲ့ LOTTE ကနေ ဖွဈပျေါလာတာပါ။
Lotteria - lotteria - LOTTERIA
2:28 AM C-Word , Chinese
တရုတ်စကား လေ့လာနေကြသူများအတွက် ဘွဲ့နှင်းသဘင်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဝေါဟာရတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
毕业典礼 bì yè diǎn lǐ
ပိယဲ့တျန်းလီ - ဘွဲ့နှင်းသဘင်
大学大礼堂 dà xué dà lǐ táng
တာ့ရွှယ် တာ့လီထန်(င်) - ဘွဲ့နှင်းသဘင်ခန်းမ
学士袍 xué shì páo
ရွှယ်ရှစ်hဖောင် - ဘွဲ့ဝတ်ရုံ
学位礼服 xué wèi lǐ fú
ရွှယ်ဝေ့လီဖူf - ဘွဲ့ဝတ်စုံ
毕业礼服 bì yè lǐ fú
ပိယဲ့လီဖူf - ဘွဲ့ဝတ်စုံ
学士服 xué shì fú
ရွှယ်ရှစ်hဖူf - ဘွဲ့ဝတ်စုံ
学士帽 xué shì mào
ရွှယ်ရှစ်hမောက် - ဘွဲ့ဦးထုပ်
流苏 liú sū
လျိုစူး - ဘွဲ့ဦးထုပ်မှ တွဲလောင်းချရသော အမြိတ်
垂布 chuí bù
ချွေhပု - ဘွဲ့အမျိုးအစားအလိုက် အရောင်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော လည်ပင်းတဝိုက်ရှိ ပိတ်စ
披肩 pī jiān
ဖျီးကျန်း - ဘွဲ့အမျိုးအစားအလိုက် အရောင်ဖြင့် ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားသော လည်ပင်းတဝိုက်ရှိ ပိတ်စ
学士服全套 xué shì fú quán tào
ရွှယ်ရှစ်hဖူf ချွမ်ထောက် - ဘွဲ့ဝတ်စုံ ဝတ်စုံပြည့်
文科学士服 wén kē xué shì fú
ဝဲင်ခဲယ်း ရွှယ်ရှစ်hဖူf - ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ ဘွဲ့ဝတ်စုံ
理科学士服 lǐ kē xué shì fú
လီခဲယ်း ရွှယ်ရှစ်hဖူf - သိပ္ပံဘွဲ့ ဘွဲ့ဝတ်စုံ
硕士学士服 shuò shì xué shì fú
ရှော့hရှစ်h ရွှယ်ရှစ်hဖူf - မဟာဘွဲ့ ဘွဲ့ဝတ်စုံ
博士学士服 bó shì xué shì fú
ပေါ်ရှစ်h ရွှယ်ရှစ်hဖူf - ပါရဂူဘွဲ့ ဘွဲ့ဝတ်စုံ
一套学士服 yí tào xué shì fú
ယီထောက် ရွှယ်ရှစ်hဖူf - ဘွဲ့ဝတ်စုံ တစ်စုံ
毕业照 bì yè zhào
ပိယဲ့ကျောက်h - ဘွဲ့ဓာတ်ပုံ
学位证书 xué wèi zhèng shū
ရွှယ်ဝေ့ ကျဲင့်h(င်)ရှူးh - ဘွဲ့လက်မှတ်
大学毕业生 dà xué bì yè shēng
တာ့ရွှယ် ပိယဲ့ရှဲင်းh(င်) - ဘွဲ့ယူကျောင်းသား
大学毕业 dà xué bì yè
တာ့ရွှယ်ပိယဲ့ - ဘွဲ့ရသည်
ဝဲင်းဖျင်(င်) - ဒီပလိုမာ
学位 xué wèi
ရွှယ်ဝေ့ - ဘွဲ့
文学士 wén xué shì
ဝဲင်းရွှယ်ရှစ်h - ဝိဇ္ဇာဘွဲ့ | B.A
文学硕士 wén xué shuò shì
ဝဲင်းရွှယ် ရှော့hရှစ်h - မဟာဝိဇ္ဇာဘွဲ့ | M.A
理学士 lǐ xué shì
လီရွှယ်ရှစ်h - သိပ္ပံဘွဲ့| B.Sc
理学硕士 lǐ xué shuò shì
လီရွှယ် ရှော့hရှစ်h - မဟာသိပ္ပံဘွဲ့ | M.Sc
博士 bó shì
ပေါ်ရှစ်h - ပါရဂူဘွဲ့ ။ ဒေါက်တာဘွဲ့ | Ph.D
文学博士 wén xué bó shì
ဝဲင်းရွှဲ ပေါ်ရှစ်h - စာပေဒေါက်တာဘွဲ့
理学博士 lǐ xué bó shì
လီရွှဲ ပေါ်ရှစ်h - သိပ္ပံပညာဒေါက်တာဘွဲ့
校长 xiào zhǎng
ရှောက်ကျန်h(င်) - ပါမောက္ခချုပ်
教授 jiào shòu
ကျောက်ရှို့h - ပါမောက္ခ
拨穗 bō suì
ပေါစွေ့ - ပါမောက္ခမှ ဘွဲ့ယူကျောင်းသား၏ ဘွဲ့ဦးထုပ်မှ အမြိတ်အား ညာဘက်မှ ဘယ်ဘက်သို့ ပြောင်းချပေးခြင်းဖြင့် ဘွဲ့ရတစ်ဦးအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ဂုဏ်ပြုပေးခြင်း။
Wǒ suīrán bú qù cānjiā bìyè diǎnlǐ, dànshì yě yào chuān shang xuéshìfú qù zhào jǐ zhāng xiàng.
ဝေါ် စွေးရန်r ပူချွိဆန်းကျား ပိယဲ့တျန်းလီ တန့်ရှစ်h ယယ်ယောက်ချွမ်းhရှန့်h(င်) ရွှယ်ရှစ်hဖူf ချွိကျောက်h ကျီကျန်းh(င်)ရှန့်(င်)
ငါက ဘွဲ့တက်မယူပေမယ့်လည်း၊ ဘွဲ့ဝတ်စုံလေး ဝတ်ပြီး၊ ဓာတ်ပုံ လေးငါးပုံလောက် ရိုက်ထားမယ်။
ဘှဲ့နှငျးသဘငျ - တရုတျလို ပွောကွမယျ။
တရုတျစကား လလေ့ာနကွေသူမြားအတှကျ ဘှဲ့နှငျးသဘငျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ ဝေါဟာရတှကေို စုစညျးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။
ပိယဲ့တနျြးလီ - ဘှဲ့နှငျးသဘငျ
တာ့ရှယျ တာ့လီထနျ(ငျ) - ဘှဲ့နှငျးသဘငျခနျးမ
ရှယျရှဈhဖောငျ - ဘှဲ့ဝတျရုံ
ရှယျဝလေီ့ဖူf - ဘှဲ့ဝတျစုံ
ပိယဲ့လီဖူf - ဘှဲ့ဝတျစုံ
ရှယျရှဈhဖူf - ဘှဲ့ဝတျစုံ
ရှယျရှဈhမောကျ - ဘှဲ့ဦးထုပျ
လြိုစူး - ဘှဲ့ဦးထုပျမှ တှဲလောငျးခရြသော အမွိတျ
ခြှေhပု - ဘှဲ့အမြိုးအစားအလိုကျ အရောငျဖွငျ့ ခှဲခွားသတျမှတျထားသော လညျပငျးတဝိုကျရှိ ပိတျစ
ဖြီးကနျြး - ဘှဲ့အမြိုးအစားအလိုကျ အရောငျဖွငျ့ ခှဲခွားသတျမှတျထားသော လညျပငျးတဝိုကျရှိ ပိတျစ
ရှယျရှဈhဖူf ခြှမျထောကျ - ဘှဲ့ဝတျစုံ ဝတျစုံပွညျ့
ဝဲငျခဲယျး ရှယျရှဈhဖူf - ဝိဇ်ဇာဘှဲ့ ဘှဲ့ဝတျစုံ
လီခဲယျး ရှယျရှဈhဖူf - သိပ်ပံဘှဲ့ ဘှဲ့ဝတျစုံ
ရှော့hရှဈh ရှယျရှဈhဖူf - မဟာဘှဲ့ ဘှဲ့ဝတျစုံ
ပျေါရှဈh ရှယျရှဈhဖူf - ပါရဂူဘှဲ့ ဘှဲ့ဝတျစုံ
ယီထောကျ ရှယျရှဈhဖူf - ဘှဲ့ဝတျစုံ တဈစုံ
ပိယဲ့ကြောကျh - ဘှဲ့ဓာတျပုံ
ရှယျဝေ့ ကြဲငျ့h(ငျ)ရှူးh - ဘှဲ့လကျမှတျ
တာ့ရှယျ ပိယဲ့ရှဲငျးh(ငျ) - ဘှဲ့ယူကြောငျးသား
တာ့ရှယျပိယဲ့ - ဘှဲ့ရသညျ
ဝဲငျးဖငျြ(ငျ) - ဒီပလိုမာ
ရှယျဝေ့ - ဘှဲ့
ဝဲငျးရှယျရှဈh - ဝိဇ်ဇာဘှဲ့ | B.A
ဝဲငျးရှယျ ရှော့hရှဈh - မဟာဝိဇ်ဇာဘှဲ့ | M.A
လီရှယျရှဈh - သိပ်ပံဘှဲ့| B.Sc
လီရှယျ ရှော့hရှဈh - မဟာသိပ်ပံဘှဲ့ | M.Sc
ပျေါရှဈh - ပါရဂူဘှဲ့ ။ ဒေါကျတာဘှဲ့ | Ph.D
ဝဲငျးရှဲ ပျေါရှဈh - စာပဒေေါကျတာဘှဲ့
လီရှဲ ပျေါရှဈh - သိပ်ပံပညာဒေါကျတာဘှဲ့
ရှောကျကနျြh(ငျ) - ပါမောက်ခခြုပျ
ကြောကျရှို့h - ပါမောက်ခ
ပေါစှေ့ - ပါမောက်ခမှ ဘှဲ့ယူကြောငျးသား၏ ဘှဲ့ဦးထုပျမှ အမွိတျအား ညာဘကျမှ ဘယျဘကျသို့ ပွောငျးခပြေးခွငျးဖွငျ့ ဘှဲ့ရတဈဦးအဖွဈ အသိအမှတျပွုကွောငျး ဂုဏျပွုပေးခွငျး။
ဝျေါ စှေးရနျr ပူခြှိဆနျးကြား ပိယဲ့တနျြးလီ တနျ့ရှဈh ယယျယောကျခြှမျးhရှနျ့h(ငျ) ရှယျရှဈhဖူf ခြှိကြောကျh ကြီကနျြးh(ငျ)ရှနျ့(ငျ)
ငါက ဘှဲ့တကျမယူပမေယျ့လညျး၊ ဘှဲ့ဝတျစုံလေး ဝတျပွီး၊ ဓာတျပုံ လေးငါးပုံလောကျ ရိုကျထားမယျ။
10:15 PM C-Word , Chinese
မျိုးပြစကားလုံး 队 ကတော့ အုပ်စု၊ အစုအဖွဲ့တွေကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
一队战士 yí duì zhàn shì
ယီတွေ့ ကျန့်hရှစ်h - တပ်သား တစ်ဖွဲ့
一队人马 yí duì rén mǎ
ယီတွေ့ ရဲင်းrမာ - စစ်သည်ဗိုလ်ပါ တစ်ဖွဲ့
မြိုးပွ စကားလုံး 队 duì
မြိုးပွစကားလုံး 队 ကတော့ အုပျစု၊ အစုအဖှဲ့တှကေို ဖျောပွတဲ့အခါမှာ သုံးနိုငျပါတယျ။
ယီတှေ့ ကနျြ့hရှဈh - တပျသား တဈဖှဲ့
ယီတှေ့ ရဲငျးrမာ - စဈသညျဗိုလျပါ တဈဖှဲ့
队 - duì - dui4 - dui - ㄉㄨㄟ
10:08 PM C-Word , Chinese
堆 ဆိုတဲ့ မျိုးပြစကားလုံးကတော့ အစုအပုံတွေကို ဖော်ပြဖို့အတွက် သုံးထားတာပါ။
一堆东西 yì duī dōng xi
ယိတွေး တုံး(င်)ရှိ - ပစ္စည်း တစ်ပုံ
一堆粮食 yì duī liáng shí
ယိတွေး လျန်း(င်)ရှီh - စားနပ်ရိက္ခာ တစ်ပုံ
一堆草 yì duī cǎo
ယိတွေး ဆောင် - မြက် တစ်ပုံ
一堆木头 yì duī mù tou
ယိတွေး မုထို - သစ် တစ်ပုံ
一堆煤 yì duī méi
ယိတွေး မေ - ကျောက်မီးသွေး တစ်ပုံ
一堆人 yì duī rén
ယိတွေး ရဲင်r - လူအုပ် တစ်စု
မြိုးပွ စကားလုံး 堆 duī
堆 ဆိုတဲ့ မြိုးပွစကားလုံးကတော့ အစုအပုံတှကေို ဖျောပွဖို့အတှကျ သုံးထားတာပါ။
ယိတှေး တုံး(ငျ)ရှိ - ပစ်စညျး တဈပုံ
ယိတှေး လနျြး(ငျ)ရှီh - စားနပျရိက်ခာ တဈပုံ
ယိတှေး ဆောငျ - မွကျ တဈပုံ
ယိတှေး မုထို - သဈ တဈပုံ
ယိတှေး မေ - ကြောကျမီးသှေး တဈပုံ
ယိတှေး ရဲငျr - လူအုပျ တဈစု
堆 - duī - dui1 - dui - ㄉㄨㄟ
8:31 PM C-Word , Chinese
မျိုးပြစကားလုံး 段 ကတော့ အတိုင်းအတာ၊ အကွာအဝေး အပိုင်းအခြား ကန့်သတ်ချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြရာမှာ သုံးပါတယ်။
一段路 yí duàn lù
ယီတွမ့် လု - ခရီး တစ်ထောက်
一段时间 yí duàn shí jiān
ယီတွမ့် ရှီhကျန်း - အချိန်ကာလ တစုံတခု
一段文章 yí duàn wén zhāng
ယီတွမ့် ဝဲင်ကျန်းh(င်) - ဆောင်းပါး တစ်ပိုဒ်
一 段 话 yí duàn huà
ယီတွမ့် ဟွာ့ - စကား တစ်ဖြတ်
မြိုးပွ စကားလုံး 段 duàn
မြိုးပွစကားလုံး 段 ကတော့ အတိုငျးအတာ၊ အကှာအဝေး အပိုငျးအခွား ကနျ့သတျခကျြတဈခုကို ဖျောပွရာမှာ သုံးပါတယျ။
ယီတှမျ့ လု - ခရီး တဈထောကျ
ယီတှမျ့ ရှီhကနျြး - အခြိနျကာလ တစုံတခု
ယီတှမျ့ ဝဲငျကနျြးh(ငျ) - ဆောငျးပါး တဈပိုဒျ
ယီတှမျ့ ဟှာ့ - စကား တဈဖွတျ
段 - duàn - duan4 - duan - ㄉㄨㄢ
8:13 PM C-Word , Chinese
ဦးထုပ်၊ ခြင်ထောင် စတာတွေကို ရေတွက်ဖို့အတွက် မျိုးပြစကားလုံး 顶 ကို သုံးပါတယ်။
ယိတင်(င်) မောက်ဇစ်z - ဦးထုပ် တစ်လုံး
ယိတင်(င်) ဝဲင်ကျန့်ဂ်h - ခြင်ထောင် တစ်လုံး
မြိုးပွ စကားလုံး 顶 dǐng
ဦးထုပျ၊ ခွငျထောငျ စတာတှကေို ရတှေကျဖို့အတှကျ မြိုးပွစကားလုံး 顶 ကို သုံးပါတယျ။
ယိတငျ(ငျ) မောကျဇဈz - ဦးထုပျ တဈလုံး
ယိတငျ(ငျ) ဝဲငျကနျြ့ဂျh - ခွငျထောငျ တဈလုံး
顶 - 頂 - dǐng - ding3 - ding - ㄉㄧㄥ
8:03 PM C-Word , Chinese
အရေအတွက် အနည်းငယ်လို့ ပြောချင်တဲ့အခါ 点 ဆိုတဲ့ မျိုးပြစကားလုံးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
一点水 yì diǎn shuǐ
ယိတျန်း ရွှေh - ရေ အနည်းငယ်
一点酒 yì diǎn jiǔ
ယိတျန်း ကျို - အရက် အနည်းငယ်
一点东西 yì diǎn dōng xi
ယိတျန် တုံး(င်)ရှိ - ပစ္စည်း အနည်းငယ်
一点事 yì diǎn shì
ယိတျန် ရှစ်h - ကိစ္စ အနည်းငယ်
一点建议 yì diǎn jiàn yì
ယိတျန် ကျန့်ယိ - အကြံပြုချက် တစ်ရပ်
一点钟 yì diǎn zhōng
ယိတျန် ကျုံးh(င်) - တစ်နာရီ
မြိုးပွ စကားလုံး 点 diǎn
အရအေတှကျ အနညျးငယျလို့ ပွောခငျြတဲ့အခါ 点 ဆိုတဲ့ မြိုးပွစကားလုံးကို သုံးနိုငျပါတယျ။
ယိတနျြး ရှေh - ရေ အနညျးငယျ
ယိတနျြး ကြို - အရကျ အနညျးငယျ
ယိတနျြ တုံး(ငျ)ရှိ - ပစ်စညျး အနညျးငယျ
ယိတနျြ ရှဈh - ကိစ်စ အနညျးငယျ
ယိတနျြ ကနျြ့ယိ - အကွံပွုခကျြ တဈရပျ
ယိတနျြ ကြုံးh(ငျ) - တဈနာရီ
点 - 點 - diǎn - dian3 - dian - ㄉㄧㄢ
7:57 PM C-Word , Chinese
အစက်လေးတွေကို ရေတွက်ဖို့အတွက် 滴 ဆိုတဲ့ မျိုးပြစကားလုံးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
一滴水 yì dī shuǐ
ယိတီး ရွှေh - ရေ တစ်စက်
一滴油 yì dī yóu
ယိတီး ယို - ဆီ တစ်စက်
一滴酒 yì dī jiǔ
ယိတီး ကျို - အရက် တစ်စက်
一滴眼泪 yì dī yǎn lèi
ယိတီး ယန်လေ့ - မျက်ရည် တစ်စက်
一滴血 yì dī xuè
ယိတီး ယွှဲ့ - သွေး တစ်စက်
一滴汗水 yì dī hàn shuǐ
ယိတီး ဟန့်ရွှေh - ချွေး တစ်စက်
一滴露珠 yì dī lù zhū
ယိတီး လုကျူးh - နှင်းစက် တစ်စက်
မြိုးပွ စကားလုံး 滴 dī
အစကျလေးတှကေို ရတှေကျဖို့အတှကျ 滴 ဆိုတဲ့ မြိုးပွစကားလုံးကို သုံးနိုငျပါတယျ။
ယိတီး ရှေh - ရေ တဈစကျ
ယိတီး ယို - ဆီ တဈစကျ
ယိတီး ကြို - အရကျ တဈစကျ
ယိတီး ယနျလေ့ - မကျြရညျ တဈစကျ
ယိတီး ယှဲ့ - သှေး တဈစကျ
ယိတီး ဟနျ့ရှေh - ခြှေး တဈစကျ
ယိတီး လုကြူးh - နှငျးစကျ တဈစကျ
滴 - dī - di1 - di - ㄉㄧ